1 KOOLPON ဆိုတာဘာလဲ?
စားသောက်ဆိုင်၊ Beauty Salon၊ ဟိုတယ်၊ သင်တန်းများနှင့် အခြားစီးပွားရေးလုပ်ငန်းများ၏ ကုန်ပစ္စည်းနှင့် ဝန်ဆောင်မှုများကို ပုံမှန်စျေးထက်သက်သာသည့် လျော့စျေးဖြင့် ဒီဂျစ်တယ်ကူပွန်များကို ရယူနိင်သည့် Application တစ်ခု ဖြစ်ပါတယ်။
2 Discount Coupon (လျော့စျေးကူပွန်) ဆိုတာ ဘာလဲ?
ကုန်ပစ္စည်း(သို့) ဝန်ဆောင်မှူအတွက် ပုံမှန်ပေးရမည့် ကျသင့်ငွေထက် လျော့စျေးဖြင့် ခံစားခွင့်ရှိတဲ့ အထောက်အထားတစ်ခုကို Discount Coupon (လျှော့စျေးကူပွန်) ဟုခေါ်ပါတယ်။
3 Discount Coupon တွေက ဘယ်လိုပုံစံမျိုးလဲ?
ယခင် စာရွက်ဖြတ်ပိုင်း၊ ကဒ် တို့အစား ယနေ့ IT ခေတ်တွင် မိုဘိုင်းလ်ဖုန်းဖြင့် Coupon Code ကို အလွယ်တကူယူလို့ရတဲ့ Website၊ Mobile Application တွေမှတစ်ဆင့် ဒီဂျစ်တယ်စနစ်သုံး ကူပွန်ပုံစံ ဖြစ်ပါတယ်။
4 Discount Coupon တွေကို ဘယ်သူတွေက ဘာကြောင့်ပေးလဲ?
စားသောက်ဆိုင်၊ Beauty Salon၊ ဟိုတယ်၊ သင်တန်းများနှင့် အခြားသော စီးပွားရေးလုပ်ငန်းများက မတူညီသော ကြောငြာ Channel များမှ လက်ရှိ Customer များအပြင် အသစ်အသစ်သော Customer များ ရရှိရန်နှင့် ရောင်းအားတက်စေရန် လက်ဆောင်၊ လျှော့စျေးပရိုမိုးရှင်းတွေကို ကူပွန်တွေအနေဖြင့် ပြုလုပ်ပေးကြပါတယ်။
5 KOOLPON Application ကို ဘယ်လိုရယူရမလဲ?
Computer ဖြင့်အသုံးပြုလိုလျှင် http://www.koolpon.com.mm တွင်လည်းကောင်း၊ Android အတွက် Google Play Store နှင့်၊ IOS အတွက် iTunes App Store တွင် အခမဲ့ ဒေါင်းလုပ်ရယူပြီး Register ပြုလုပ်ကာ ရယူနိုင်ပါတယ်။
6 KOOLPOL Mobile Application ကို ဒေါင်းလုပ်ရယူလျှင် အင်တာနက်ခ မည်မျှကုန်မလဲ?
အင်တာနက် ပျမ်းမျှ (1MB) ကို6ကျပ် ဖြင့်တွက်လျှင်
Android=> 5.2MB ✗6= 31.2 Kyats
IOS => 27.3MB ✗6= 163.8 Kyats ကျပ်သာ ကုန်ကျပါမည်။
7 KOOLPON ကနေ လျှော့စျေးကူပွန်ကုဒ်တွေ ဘယ်လိုယူရမလဲ?
ဦးစွာ KOOLPON Application ကို ထည့်သွင်း၍ User Register (ဖုန်းနံပါတ်(သို့) အီးမေးလ်(သို့) Facebook Login) ဖြင့်ပြုလုပ်ပါ။
မိမိစိတ်ဝင်စားသော ကူပွန်ကိုနှိပ်၍ လျှော့စျေးနှင့် ပတ်သတ်သည့် အသေးစိတ်အချက်အလက်၊ စည်းကမ်းချက််များကိုဖတ်ပါ။
ကူပွန်ကုဒ်ရယူလိုလျှင် “ကူပွန်ရယူမည််” ကို နှိပ်၍ ကူပွန်ကုဒ်ရရှိိကြောင်း ပေါ်လာပါလိမ့်မည်။
8 KOOLPON မှ ရယူထားသော လျှော့စျေးကူပွန်ကုဒ်(Discount Coupon) တွေကိုဘယ်လိုအသုံးပြုရမလဲ?
ဦးစွာ မိမိအလိုရှိသည့် ကူပွန်ကုဒ်ကို ရယူပါ။
ဆိုင်တွင် ငွေမရှင်းမီ KOOLPON မှ Discount Coupon (လျော့စျေးကူပွန်) ဖြင့် ရှင်းမည်ဟု ဦးစွာအသိပေးပါ။
ထို့နောက် ဘယ်ဘက်အပေါ်ထောင့် Menu Icon ထဲရှိ My Coupon ကိုနှိပ်ပါ။
မိမိရယူထားသော လျော့စျေး (သို့မဟုတ်) လက်ဆောင် ကူပွန်ကုဒ်ကိုပြခြင်းဖြင့် Discount များကို ခံစားနိုင်ပြီဖြစ်ပါတယ်။
9 Discount Coupon အမျိုးအစားများ
Exclusive Coupon ဆိုသည်မှာ ကူပွန်ကို download ရယူပြီး KOOLPON နဲ့ စာချုပ်ချုပ်ဆိုထားတဲ့ ဆိုင်များတွင် သွားရောက် အသုံးပြုနိုင်ပါသည်။
Bank Card နဲ့ ဆိုင်သော discount information များ
ရန်ကုန်မြို့တွင်းပေးနေသော discount information များ
10 Favourite Coupon
မိမိနှစ်သက်ရာ discount coupon များကို favourite coupon လုပ်၍ သိမ်းဆည်းထားနိုင်ပါသည်။
Favourite menu တွင်သိမ်းဆည်းထားသော discount coupon များကိုကြည့်နိုင်ပါသည်။
11 Near By Location
မိမိရောက်ရှိနေသော နေရာအနီး အကွာအဝေးတွင် ရှိနေသော discount coupon များကို ရှာဖွေနိုင်ပါသည်။